Ny Ulefone Armor 5, finday matanjaka miaraka amin'ny notch, dia nambara tamin'ny fomba ofisialy | Androidsis
Ulefone dia nanambara ny Armour 5, finday matanjaka izay ho tonga miaraka amin'ny zava-baovao mbola tsy fahita teo amin'ireo fitaovana fanoherana avo lenta amin'ity andiany ity: naoty iray.
Izany dia mitaky zava-baovao tena mahaliana, satria ny notch, na dia hita ao amin'ny fitaovana ambany aza, dia mifantoka, mihoatra ny zava-drehetra, amin'ny telefaona antonony sy avo lenta, fa tsy amin'ny fantsona goavambe.
Ny Ulefone Armor 5 dia misy efijery mitovy amin'ny an'ny iPhone X raha miresaka momba ny bika isika. Ity dia HD 5.85-inch 1.520 x 720-pixel HD + miaraka amin'ny taha 18.9: 9 ary ny laharana iray eo an-tampony. Ireo bezel manify, izay itazonany azy io, dia mamela ny tahan'ny lamba hatramin'ny 91% amin'ny vatana ary, ho fiarovana azy dia rakofon'ny Corning Gorilla Glass 4 izy io.
Izy io dia manana processeur Mediatek MT6763 valo-core ao amin'ny 2.0GHz miaraka amin'ny 4GB RAM sy 64GB fitehirizana anatiny izay manaiky ny fanitarana amin'ny alàlan'ny microSD hatramin'ny 256GB. Izy io koa dia miaraka amina fakan-tsary 16MP + 5MP aorina aoriana ary fakan-tsarimihetsika tokana eo anoloana 13MP, ary bateria 5.000 8.1mAh lehibe miaraka amin'ny fanohanana ny famahanana haingana sy ny famahanana tsy misy tariby. Farany, manana mpamaky dian-tànana hita eo ambanin'ny fakantsary aoriana izy, ary koa ny fanohanana ny famohana ny tarehy, NFC, ary Google Pay miaraka amin'ny Android XNUMX efa napetraka.
Mikasika ny kalitaon'ny fahavelomany, tonga IP68 voamarina, izay midika fa afaka mihazakazaka amin'ny tontolo ivelany be loatra, toy ny oram-be, fotaka, sns. Fanampin'izay, namboarina tamina rindrambaiko maromaro izy, anisan'izany ny kompà, jiro, haavo, sary mihantona, fandrefesana haavo, fitaratra manalehibe, fanairana, ary tsipika fantson-drano.
Ny vidiny sy ny fisian'ny Ulefone Armor 5
Nambara tamin'ny 6 Aogositra ity fitaovana ity, daty ahafahantsika mahazo azy eny an-tsena. Tsy mbola voamarina ny vidiny, fa rehefa manakaiky ny daty, na amin'ny marimarina amin'ny andro fandefasana dia ho fantatsika.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny vokatra dia tsidiho ny pejy ofisialin'ny orinasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny Ulefone Armor 5, finday matanjaka miaraka amin'ny notch, dia nambara tamin'ny fomba ofisialy